ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန် - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
အဘယ်ကြောင့် ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအရေးကြီးသော?
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Utility ကို:
ယှဉ်ပြိုင်မှု Pay ကို:
အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းနည်းနည်းမှာကျန်ရှိသောတဦးတည်း excel ဖို့မြျှောလငျ့ကွောငျးကိုချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အခြေခံဖြစ်သည့်နှင့်တသားတအစဉ်စွဲအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ပြင်၌တစ်ဦး certified ရရှိထားပြီးလေ့ကျင့်ရေးထူးကဲသောအဘို့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ITIL အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိုင်တီစီမံခန့်ခွဲမှု၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အရေးကြီးပါတယ်သင်ယူမှုရာ ITSM တစ်တည်မြဲပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလေ့ကျင့်ရေးအဆင်သင့်အနာဂတျအတှကျလမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေးသောဤပီပီလယ်ပြင်ကျွမ်းကျင်အတွက်ကူညီပေးသည်။
ဒါဟာလန်းဆန်းနေဖို့ခဲယဉ်းအသံစခွေငျးငှါသေးကရို့ကားမဟုတ်ဘူး။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏အကြီးမားဆုံးသောစမ်းသပ်လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ဖို့လက်ရှိဆက်လက်ရှိနေရန်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘယ်မှာတဦးတည်း excel စေသည်ဘာကိုအချိန်အတန်ကြာအပေါ်သွားသူတွေကိုထံမှသာရေပန်းစားဖက်ရှင်ရိုးရှင်းစွာတသမတ်တည်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူလန်းဆန်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကြာရှည်ကြောင်းနည်းစနစ်အသိအမှတ်ပြုနေတဲ့အခြေအနေပါ။ လယ်ပြင်၌ကံဇာတာများအတွက်သင်ယူတက်ကောက်နေကကျွမ်းကျင်ဖို့ကျော်ကြားသည်။ ITIL အောင်လက်မှတ်သင်တန်းတဦးတည်းလယ်ပြင်၌အင်အားသုံးကောက်ကူညီပေးသည်နှင့်သင်အုပ်စုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဆက်လက်တည်ရှိကူညီပေးသည်။
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲအလိုတော်အောက်မှာပေးထားတဲ့အရေးပါမှုနှင့် ITIL သင်တန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခု Item စုံစမ်းစစ်ဆေးသင်ဤသင်တန်းသည်သင်၏တန်ဖိုးရှိရှိရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ရှိသည်နိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်ပေးပါ။
အဆိုပါ ITIL စိတ်ကူးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အိုင်တီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အထောက်အကူအဘို့အလေ့အကျင့်များအနေနဲ့အစီအစဉ်တည်ထောင်ရန်, အ 1980 ရဲ့ကြားတွင်ဂရိတ်ဗြိတိန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏တည်ထောင်ကတည်းက ITIL parameter သည်လက်ခံရရှိပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်အစဉ်စွဲအိုင်တီဖွံ့ဖြိုးဆဲစက်ဝိုင်း၏လတ်တလောအစီအမံတွေ့ဆုံရန်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ITIL ၏ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်ပြည့်စုံသည့်စနစ်ယှဉ်ပြိုင်အိုင်တီအားလုံးအရွယ်အစား၏အဖွဲ့အစည်းများသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြီးကြပ်နေပါတယ်။
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတစ်ခုအတိုကောက်အခြေခံအဆောက်အအုံစာကြည့်တိုက်, ITIL အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့သည့်ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးချဖို့အပေါ် concentrates ။ ဒါဟာ ITSM (အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု) ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူတစ်ဦးပီပီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သို့သော်အဖွဲ့အစည်းက-အထူးသဖြင့်မဟုတ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏မဟာဗျူဟာမြောက်တန်ဖိုးများတက် setting များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ပုံစံများ, နည်းဗျူဟာများ, ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းစီမံခန့်ခွဲ။ ITIL သူတို့ပြောင်းလဲအဆင့်မြှင့်တင်, စီစဉ်တိုင်းတာနှင့် actualize နိုင်ပါတယ်ရှိရာကနေအဖှဲ့အစညျးမြားမှတစ်ဦးစင်မြင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
ယနေ့အများဆုံးယဘေုယအြားကောင်းချီးတည်ထောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ခြင်း ITIL အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများကိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်အဖွဲ့အစည်းများကအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒြပ်စင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ပေးသောအပြောင်းအလဲန်ဆောင်မှုများချက်ပြုတ်အားဖြင့် client ကိုတိုးမှန်မှန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကူညီပေးသည်။ အဆိုပါ ITIL အိုင်တီ၏တိုးတက်မှုအတွက်ကြီးပြင်းစေခြင်းငှါလမ်းဆုံခုန်အကူအညီယခု မှစ. ပိုကောင်းအရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုများပြီးမြောက်အတွက်ကူညီဖို့ frameworks hones ။
ITIL စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတ္ထုများပိုမိုကောင်းမွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွပ်မျက်ပြီးမြောက်ကိုထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ဘို့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းရေးသောပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဏ္ဍာရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စျေးကွက်အရပ်သို့အသွင်ပြောင်းကူညီပေးသည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်, IBM ကကဲ့သို့အတော်များများတကမ္ဘာလုံးချီးကျူးအဖွဲ့အစည်းများထိထိရောက်ရောက်သူတို့ရဲ့အိုင်တီအကျိုးအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ITIL ကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့် Picks တက်အကြိုးခံစားကြပြီ။
အဆိုပါ ITIL ကျော်တစ်ဦးကလျောက်ပတ်သောတာဝန်ခံအကူအညီနဲ့တပြင်လုံးကိုလုပ်သားအင်အား '' အချို့အတွက်ထိုနည်းတူသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များထောကျပံ့ပေးအနေဖြင့်အနည်းငယ်အဖွဲ့အစည်းများဒါ့အပြင်အဆိုပါ ITIL system ကိုအသုံးချဖို့၏အနီးအနားမှာလေ့ကျင့်ရေးပေး, တူညီတဲ့၏တန်ခိုးအာနုဘော်ကိုနားလည်သည်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ် ITIL အောင်လက်မှတ် မှတ်လှည့်။
Master ITIL အောက်မှာပေးထားတဲ့အဆင့်ဆင့်ပြီးနောက်ယူပြီးမှနောက်ဆက်တွဲပြည့်စုံခြင်းကိုခံရနိုင်သည်
ITIL ၏ဖောင်ဒေးရှင်းကအဆင့်ကို - နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဆိုတင်သွင်းအဖြစ်, ဒီ ITIL လေ့ကျင့်ရေး၏အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်။ ITIL အောင်လက်မှတ်၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအဆင့်အထိဖြစ်ခြင်းကြောင့်စကားလုံးများ၏နောက်ခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတင်ဆက်နှင့် ITIL န်ဆောင်မှုအားကောင်းဘို့အရေးကြီးသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ layout ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအိုင်တီ၏စိတ်ကူးသစ်များနေသောအလုပ်သင်အားလုံးကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဒေတာများကိုပါဝငျသညျ။
ITIL Practitioner -2016 တွင်ထည့်သွင်း, အဆိုပါ ITIL Practitioner ဟာ ITIL အောင်လက်မှတ်သို့လတ်တလောအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ITIL Practitioner မှတဆင့်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ်မှတ်အားကောင်းနိုင်ရန်အတွက် ITIL ဖွဲ့စည်းပုံ၏အသုံးချ expounding များအတွက် fit တက်သွားလေ၏။ ဒီအဆင့်အဖွဲ့အစည်းပြောင်းလဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်း, Interchange နှင့်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်တိုင်းတာ familiarizing အာရုံစိုက်။
အလယ်အလတ်အဆင့် ITIL - ဒီအဆင့်မှာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုသူတို့တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်သို့မှီခို ITIL စနစ်၏ Primitive ၏ပြောင်းလဲ module တွေကျော်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ၎င်း module နှစ်ခုဒေသများဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု Capability စီမံခန့်ခွဲ။ ယခင် ITIL နှင့်အတူဖော်ထုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများကိုလေ့လာသင်ယူပါဝင်သည်နေစဉ်နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချက်အလက်များ၏သိမ်မွေ့ဒြပ်စင်ပေးသည်။
ITIL ကျွမ်းကျင်သူ - ဒီအဆင့်ကို ITIL ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စနစ်၏အစွန်းမိနစ်ဖြတ်တောက်နှင့်အတူခွဲအသုံးပြုထားပြီးအကျွမ်းတဝင်သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းခြင်း။
ITIL Master - ဒီအဆင့်ဟာစီစဉ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်အတွက်အတိုးယူတဲ့သူတွေကိုခွဲဘို့ဖြစ်၏။ ခွဲလယ်ပြင်၌ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တို့ကိုစစ်မှန်သောဖွဲ့စည်းပုံမှာရင်ဆိုင်ရဖို့သေချာပေးသည်စေသည် ITIL လေ့ကျင့်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ကို။
ITIL အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူကစားသုံးသူသစ္စာရှိမှုဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ချဉ်းကပ်ပေးသည်နှင့်ထို့ပြင်ထိရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်အဖြစ်အကျိုးအချို့ရှိပါသည်။ ITIL စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတ္ထုများမှတဆင့်ထိရောက်စွာအရှင်ဦးဆောင်သည့်အလုပ်များတွင်ဝေးအထပ်ထပ်ကနေစောင့်ရှောက်သောသူတို့၏အကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များနှင့်တွေ့ဆုံအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ ITIL သင်သည်ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချဖို့ lib ကြော်ငြာအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်တတ်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အဖွဲ့အစည်းများ၏အားနည်းဇုန်နှင့်အတူမျက်စိမှမျက်စိများမှာကတည်းက။ တစ်ဦးကအဘယ်အရာကိုတစ်ခုပြီးသားကောင်းသောအရာတစုံတခုချွတ်ထိပ်ဆုံးမှ ITIL ပိုကောင်းနှင့် speedier ရွယ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်သွားသေချာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါအင်္ကျီလက်တက် focal မှတ်၏ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအရေအတွက်သည်နှင့်အတူ, အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ITIL မာစတာစာချုပ်ချုပ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးနိုင်ဘူး။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားဤသိသာလက္ခဏာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ITIL ပညာရှင်များများအတွက်အကျိုးစီးပွားချဲ့ထွင်ကြပါပြီ။
အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုသည့်ဝန်ဆောင်မှုများအိုင်တီအတွက်အသုံးချတွေ့ရှိသည်ဟုအလေ့အကျင့်များတကမ္ဘာလုံးချီးကျူးထားဖြစ်ခြင်း, ITIL လေ့ကျင့်ရေးလယ်ပြင်၌ပိုကောင်းပြိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထွန်းလင်း။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကိုသိမှတ်ကြလော့အဆက်မပြတ်အသုံးဝင်သည်နှင့်သင်အခြားသူများကိုကျော်မြင့်မားသောမြေပြင်ကိုပေးတော်မူ၏။ သင်မိနစ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်ကတည်းကတစ်ဦး ITIL အောင်လက်မှတ်ရတဲ့၏ပါတီအား၌သင်တို့ကိုထိရောက်သောအလုပ်အကိုင်လမ်းများအတွက်ပဏာမခံပိုမိုအလေးသာရှိသည်။
တစ်ဦး ITIL အောင်လက်မှတ်ရှိခြင်းအိုင်တီပညာရှင်များဟာ ITIL ဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံရရှိကြသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဖြင့်မှတ်လျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးကကြည်လင်ပြတ်သားစွာပြောင်းလဲမှု, မည်သည့်အမှု၌, ITIL အောင်လက်မှတ်နှင့်အတူအလုပျသမားဦးတည်နည်းနည်းနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMB ရဲ့) နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှစ်ဦးစလုံး၏ပွင့်လင်းသည်။ SMB ရဲ့ယနေ့လုံးလုံးကြောင့်ကို virtual စျေးကွက်၏တိုးတက်ဝဠာကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရထားတဲ့ ITIL ၏ခန့်မှန်းချက်သိနေကြသည်။ အိုင်တီယခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကျော်ကြားအပိုင်းအစသို့လှည့်နှင့်ကနေအများဆုံး saddle မှ SMB ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုသိရသည်။ ဤအချိန်ကနေရှေ့ကိုအဘယ်သူမျှမအဖွဲ့အစည်းကြီးမားသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာ SMB ရဲ့အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်စိတ်ပျက်စရာ၏လုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက်အကြောင်းရင်းသေးစိတ်ပျက်စရာတိုးချဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့လိုအပ်မယ်လို့အဲဒီအလွန်တရာကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ရထားတဲ့ ITIL ချစ်ခင်လေးမြတ်။
အိုင်တီအသီးအသီးနေ့အိုင်တီအကျိုးအတွက်တုတ်ကျင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တဲ့သူဒါရိုက်တာများ, မျှော်လင့်များအတွက် ITIL အောင်လက်မှတ်သိသာသည်။ အဆိုပါဖက်စပ်ဒါရိုက်တာ၏ကြီးမားသောအဘို့ရေရှည်မှာ ITIL အသိအမှတ်ပြုသူတို့ကိုအောက်မေ့အောင်ထဲမှာ, အိုင်တီလယ်ပြင်၌တိုးတက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိကတည်းက။ သူတို့ဟာသေးအတူတူပင်၏ပင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို ITIL လုပ်ထုံးလုပ်နည်း disentangling ၌သူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည် ITIL မာစတာဖြစ်လာဆီသို့တိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘေးဖယ်လူကြိုက်များဖြစ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးကျွမ်းကျင်သူနောက်မှာ ITIL ကြေငြာပူးတှဲပါနဲ့တူညျမွကွေီးပျေါအကြိုးခံစားခှငျ့မှဆင်းအချို့ကု သ. မရသောမြော်လင့်ခြင်းမှ:
ITIL အောင်လက်မှတ်သင်၏ IT ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုထက်မြက်လာစေပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုသင်ဒါ့အပြင်တောင်းဆိုမှုများပြောင်းလဲနေတဲ့သတိထားနေဖို့ကူညီပေးသည်မဟုတ်အိုင်တီ rehearses များအတွက်တည်ငြိမ်တည်ထောင်ခြင်းစုံ။ ITIL ဖွဲ့စည်းပုံမှာအခြားနည်းစနစ်များအပေါ်၎င်းတို့၏ပျံ့နှံ့သရုပ်ပြပြီနည်းလမ်းတခုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကတည်းကအလားတူ၏သတင်းအချက်အလက်အဆင့်မြှင့်ပညာရှင်များညံ့နဲ့အမြန်ရလဒ်များ၏လေးသာမှုနှင့်အတူအလွယ်တကူအလုပ်လုပ်တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး ITIL certified ရရှိထားပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရှင်သိမ်းပိုက်ဟန်ပြအတွက်အများဆုံးအရည်အချင်းပြည့်သူတို့ကိုအောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဘို့အစိုင်အခဲအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်သတင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ITIL ၏ကွပ်မျက်အရေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်အတူလက်မှတ်တစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့်သူတို့စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင် acclaiming များအတွက် artfulness ပေးသည်။ တစ်ဦး ITIL certified ရရှိထားပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းထိုနည်းတူအဖွဲ့အစည်းများမှာသူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တာဝန်များမှလေးစားမှုနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဖြေရှင်းအတွက်မြင့်မားသောမြေပြင်ရှိပါတယ်။
ITIL ယခု မှစ. နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌မဆိုအမှတ်မှာ drop ဖို့မသွားကြောင်းအကြံပြု ISO / IEC 20000 အစီအမံနဲ့လည်စည်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ထက်ပို 800 အဖွဲ့အစည်းများအသိအမှတ်ပြု ISO / IEC 20000 ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ ITIL certified ရရှိထားပြီးပညာရှင်များများအတွက်အကျိုးစီးပွားအတွက်အထွတ်အထိပ်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်။ သူတို့ကအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဘာသာရပ်၏သူတို့ရဲ့အလားအလာအချက်အလက်များ၏အခြားသူများကိုကျော်တစ်လျောက်ပတ်သောရိုက်ချက်ရပ်တယ်။
တစ်ဦးကအသိအမှတ်ပြု ITIL လာမည့်လျှင်ထိုအတူသိမ်းပိုက်ပရိုဖိုင်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်မှာတစ်အန္တရာယ်ယူရွေးချယ်နိုင်သည်။ 10,000 အဖွဲ့အစည်းများထက်ပိုတကမ္ဘာလုံးနောက်ပိုင်းတွင်ပြည်ပမှာတစ်ဦးတန်ဖိုးရှိရှိအနာဂတျအတှကျဖြစ်နိုင်ခြေလွတ်မြောက်စေဖို့, အ ITIL ဖွဲ့စည်းပုံမှာနှုတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။
ITIL အတွက်တစ်ဦးကလက်မှတ်လစာနှင့်တိုးတစ်ခုတက်၏အလေးသာတည်ဆောက်။ ပုံမှန်တခုတခုအပေါ်မှာ ITIL ပါရမီကိုယ်စားလှယ်လောင်းပိုမိုမြင့်မားလစာစကေးရရှိသွားတဲ့နှင့်ထို့ပြင်ရုံးထဲမှာထင်ရှားတဲ့ရာထူးရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးကတရားဝင်နှင့်ပီပီ ITIL လေ့ကျင့်ရေးမြောက်မြားစွာအွန်လိုင်းသင်တန်းများမှတဆင့်ပွင့်လင်းသည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းများလမ်းညွှန်ထက်အခြားသင်ယူမှုနှင့်နည်းပြကိုဖယ်ရှားမောင်း ITIL ၏သတင်းအချက်အလက်တိုးတက်အောင်အတွက်ဒါ့အပြင်အကူအညီနဲ့စာသင်ခန်းအတန်းနှင်။ certified ရရှိထားပြီးအဖွဲ့အစည်းများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ITIL လေ့ကျင့်ရေးအလားတူအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့ခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့စိတျမြားနှငျ့တူသောကိုက်ညီသောသင်တန်းကိုတက်ယူကြောင်းအာမခံပါသည်။
ပိုများသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း ITIL ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဒီဖွဲ့စည်းပုံ၏အစဉ်မပြတ်တိုးချဲ့အကျိုးစီးပွားကနေအခြအခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်ဦးမရှိခြင်းထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ ITIL သင်တန်း၏အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်အတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရအိုင်တီစက်ဝိုင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကူညီပေးသည်။ တစ်ဦး ITIL certified ရရှိထားပြီးကျွမ်းကျင်ခြောတစ် speedier နှင့် steadier အရှိန်အဟုန်မှာတိုးတက်မှု၏ခြေလှမ်းထိုင်ခုံလုပ်ဖို့ကိုတက်ပါလိမ့်မယ်။
Oracle ကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် - တစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်